FAQs - Iris Runako Co., Ltd.
2.Q: Ndingawana sei muenzaniso kuti nditarise mhando yako?
A: Kutanga, ngatizivisei chako chinodikanwa maererano nezvinhu, ipapo isu tichapa zano maererano uye tipe chitaurwa. Kana zvese zvese zvasimbiswa zvatumira iwo masampuli. Semuenzaniso mutengo unodzoserwa kana odha yaiswa.
3.Q: Unogamuchira OEM ODM uye Unogona kuita dhizaini kwatiri?
4.Q: ndinogona kutarisira kuti ndiwane muyenzaniso?
A: Kutendeseka, zvinoenderana nehukuru hwehuwandu uye mwaka waunoisa iwo odha. Kazhinji ingave mazuva makumi maviri nemashanu - makumi matanhatu. Isu tiri fekitori uye isu tine yakasimba chigadzirwa kuyerera, isu tinokurudzira kuti iwe utange kubvunza mwedzi miviri pamberi pezuva raungade kuwana zvigadzirwa munyika yako.
7.Q: Ungatibata sei isu?
Tiri pano kuzokubatsira iwe - ndapota inzwa wakasununguka kutitumira email ku irisbecosmetics@gmail.com.